Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Boostada martida » Sida loo Qorsheeyo oo loo tijaabiyo Qalabka Ugaadhsiga Dalkii Dambe?
Dadka ugaarsada marar badan horeba way garanayeen sida ay u dhiiran tahay, si kastaba ha ahaatee, ugaarsiga buuraha ka fog dadka badana waxay noqon kartaa mid aad u dhiiran. Ugaadhsiga waddanku wuxuu u baahan yahay xoog badan iyo dulqaad si aad boorsada ugu rido ciyaartaada riyada. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale u baahan tahay ugaarsadaha inuu go'aansado inay rabaan inay boorsada dhabarka qaataan, raacaan baqlo ama faras ama xitaa ka guuraan deegaankooda meel kale. In kasta oo ay dhammaantood u ekaan karaan kuwo cabsi leh, waxay ku siin karaan waayo-aragnimo iyo xasuus badan oo aan la ilaawi karin oo aad ku qiimayso. Sidaa darteed, hagahaan dhamaystiran ayaa kuu sharxi doona sida loo qorsheeyo oo loo tijaabiyo qalabka ugaarsiga dalkaaga. Sii wad akhriska!
Qorshaynta Qalabka ugaarsiga ee Waddankaaga dambe
Waxa laga yaabaa inaad hadda dareemayso culays badan oo laga yaabo inaad u malaynayso inaad u baahan tahay inaad shay kasta kula tagto buuraha. Runtii taasi arintu maaha. Waxaa jira dhowr waxyaalood oo muhiim ah si aad safarkaaga uga dhigto mid guul leh. Xusuusnow qalabka soo socda ee loo baahan yahay:
Markaad u socoto ugaarsiga waddaniga, boorsadaada dhabarku waxay noqon doontaa saaxiibkaaga ugu fiican laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa mid ka soo horjeeda haddii aadan dooran midka saxda ah. Waxaad u baahan tahay inaad soo iibsato shandad dhabarka oo khafiif ah si aad uga hortagto culayska dhabarkaaga ama garbahaaga.
Inta ay fududaato shandadaha dhabarka, waa qaali. Laakiin haddii aad u maleyneyso inay tahay maalgashi hal mar ah, waxay noqon doontaa mid u qalantaa lacagta. Waa inaad hubisaa inay si fudud u qaadi karto dhammaan alaabtaada, sidaas darteed, waa inaad xaqiijisaa awooddeeda ka hor inta aanad iibsan.
Way ku habboon tahay inaad hesho shandad dhabarka oo leh qaybo badan iyo siibooyin si loo hubiyo inaad si fudud oo degdeg ah uga bixi karto shay kasta oo aad rabto markaad ugaarsanayso.
Heerkulka maalintii iyo habeenkii way ku kala duwanaan karaan buuraha waxaadna u baahan tahay inaad dharkaaga u xirto si habboon. Waxa kale oo aad u fiican inaad hubiso cimilada gobolka aad tagi doonto sababtoo ah waxay kaa caawin doontaa inaad si caqli gal ah u qorsheysato.
Guud ahaan, waa inaad maskaxda ku haysaa in dharkaagu aanu ka samaysan suuf, maadaama uu nuugo dhididka iyo qoyaanka. Maadaama aad aad u dhididsanayso markaad socoto, waxa fiican inaad hesho polyester ama dhar kasta oo kale oo leh sifooyin qoyaan leh.
Waa inaad haysataa lakabyo dheeraad ah oo dhar ah maadaama ay baraf noqon karto habeenkii. Kabaha kabaha, waa inaad ku maalgelisaa kabo raagaya oo raaxo leh oo fudud, maadaama aadan rabin in finan cagahaaga ka soo baxaan mayl-mayl dhul aan sinnayn.
Mar labaad, kabaha noocan oo kale ah waxay kugu kici karaan wax ka badan $200, laakiin way u qalmi doontaa. Waa inaad sidoo kale ka fogaataa sanduuqyada suulasha suulasha dhuuban sababtoo ah waxay xaddidayaan socodka dhiigga.
Deegaankaaga hurdada wuxuu u baahan yahay inuu ahaado mid raaxo leh intii suurtagal ah si aad jidhkaaga u buuxiso oo aad awoodo inaad saacado badan ugaarsato maalinta kale xaalad adag.
Markaad qorsheyneyso inaad iibsato bacda hurdada, waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad ku xisaabtanto walxaha laga samayn doono, maadaama ay tahay inay u adkeyso dusha sare ee buuraha.
Intaa waxa dheer, waxa fiican in aad hesho bac biyo-celin ah oo leh suuf khafiif ah oo qaali ah si loogu raaxaysto ugu badnaan iyo cimri dherer.
Markaad ugaarsato Buuraha Rocky, hubaal ma rabto inaad kor u qaaddo laba saacadood oo kale iyadoo loo eegayo "malahaaga" qallafsan ee aad aragtay elk weyn. Taasi waa sababta aad ugu baahan tahay inaad u qorsheysato indhahaaga iyo sidoo kale ugaarsiga waddan dambe.
Dhab ahaantii waa inaad maalgelisaa muraayadaha tayada sare leh, sababtoo ah waxay kuu ogolaanayaan inaad aragto meel dhow adoon lumin wakhtigaaga iyo dadaalkaaga. Taas waxaa barbar socda, maalgelinta safafiyaha ayaa sidoo kale kaa caawin kara xisaabinta masaafada, si aad u qorsheysato safarkaaga si habboon.
Labadan shay boos badan kama qaadan doonaan boorsadaada, sidoo kalena aad uma cusla. Si kastaba ha noqotee, haddii aad u maleyneyso inaad la qabsato baaxadda waa lagama maarmaan, waa inaad maskaxda ku haysaa inay noqon karto mid aad u culus. Sidaa darteed, haddii aad u socoto koox ama lammaane ugaarsi ah, wadaagista waxay noqon doontaa ikhtiyaar ku habboon.
Tijaabinta Qalabka ugaarsiga ee dalkaaga dambe
Waxaa jiray waayo-aragnimo badan oo ugaadhsadayaashu markii ay helaan dhammaan qalabka heerka koowaad ee tacaburkooda weyn oo ay ku dhameeyaan qalab jaban marka ay ugaarsanayaan. Waxay noqon kartaa waayo-aragnimo aad u xun, sidaas darteed, waa inaad si sax ah u tijaabisaa dhammaan qalabkaaga ka hor intaadan u tegin ugaarsiga.
Waa inaad hubisaa haddii batteriga tooshkaaga u baahan yahay in la beddelo ama GPS-kaagu si habboon u shaqeeyo. Waa inaad sidoo kale tijaabisaa shandadaada dhabarka oo aad qiimeyso haddii ay ku habboon tahay wax kasta sida saxda ah, oo aad awood u leedahay inaad miisaanka si raaxo leh u qaado. Sidoo kale, waa inaad sidoo kale si fiican u baartaa qalabkaaga kale.
Intaa waxaa dheer, waa inaad sidoo kale hubisaa in teendhadaada xero ay ku jirto xaalad wanaagsan, waxaadna tijaabin kartaa adigoo ku dhejinaya daaradaada ama aad safar gaaban oo gaaban u geleyso asxaabtaada usbuuca. Tani waxay kuu ogolaan doontaa inaad hubiso haddii ay u baahan tahay bedel ama dayactir, halkii aad burburin lahayd safarkaaga ugaarsiga.
Nimrah Shiekh wuxuu leeyahay,
Janaayo 15, 2022 markay tahay 19:55
jawaabtaada waan sugayaa
Mahadsanid & Mahadsanid